Qaramada Midoobay oo dhaqaalihii ugu badnaa ku maal gelineysa dhallinyarada Soomaaliyeed – Balcad.com Teyteyleey
Qaramada Midoobay oo dhaqaalihii ugu badnaa ku maal gelineysa dhallinyarada Soomaaliyeed
Saraalka ugu sareeya Qaramada Midoobay arimaha Soomaaliya ayaa sheegay shaqo la’aanta dhalinyarada ay tahay arin walaac leh, isagoona madaxda Soomaaliya ugu baaqay in la siiyo xirfado ay ku shaqeystaan dhalinta Soomaaliyeed.
Wakiilka QM u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating ayaa sheegay in dhaliyarada la maalgeliyo hadda ay micinaheedu tahay mustaqbalka Soomaaliya oo la maalgeliyay.
“Shaqo la’aanta dhalinyarada waa mid walaac weyn leh. Heerka waxabarashada oo hooseeya helitaanka xirfado iyo fursado tababar waa dhibaatooyinka dhabta ah ee saameynta aan wanaagsaneyn ku leh dhalinta,” ayuu yiri Keating.
Sida laga soo xirgtay ururka shaqaalaha aduunka ee ILO in dadka Soomaaliyeed ay yihiin kuwa ugu badan ee shaqo la’aan ah guud ahaan caalamka oo 33% dhaliyarado yihiin baaga muundo.
Danjire Keating ayaa sidoo kale, sheegay in sababaha ugu weyn ee shaqo la’aanta dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahay isku dheelitir la’aanta waxbarashada iyo xirfadaha kale oo ay u baahan yihiin loo shaqeeyiyaasha.
Waxaa uu sidoo kale, sheegay in ilaha dhaqaalaha oo xadidan ay tahay caqabad weyn oo keeneysa in wax laga qabto dhibaatada heysata dhalinyarada waxayna u nuglaan karaan in la xagjireeyo isla markaana lagu shaqeysto.
Waxbarasho wanaagsan ayuu sidoo kale sheegay, Keating in kamid tahay waxyaabaha keeni kara in dhalinyarada shaqooyin helaan si loogu gun gaaro qorshaha sanadka 2030 oo Qaramada Midoobay kamid ah hiigsigeeda horumarka caalamka.
Qaramada Midoobay hadda waxaa ay ku maalgelineysaa 17.5 million oo doolar dhalinyarada Soomaaliyeed sidii xirfado shaqo loo abuuri lahaa; waxaana xirfadahaas kamid ah Caafimaadka, Dhismaha guriyaga, Farsamada gacanta, Beeraha, Kalluumeysiga iyo Hal abuurka ganacsiga.
The post Qaramada Midoobay oo dhaqaalihii ugu badnaa ku maal gelineysa dhallinyarada Soomaaliyeed appeared first on Ilwareed Online.
Wasiiradii Maamulka Puntland oo Shaqadda laga ceyriyay
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee dalka oo digniin u direy xukuumada